“हामी एउटा सफलताले ल्याएको खुशीको क्षणमा छौँ । हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका, स्वास्थ्य विज्ञानका आदिम रुप धन्वन्तरिदेखि गंगालाल हृदय केन्द्रको नयाँ विशिष्ट सुविधा सम्पन्न आधुनिक कक्ष निर्माणको सफलतासम्म आइपुगेका छौँ । यो नेपालको सफलता हो । नेपालीको सफलता हो । यो सफलता मानव जातिको सफलता हो । किनभने हामी देश विशेषको नागरिकता हेरेर बिरामीको उपचार गर्दैनौँ । मानव जातिको बिरामीको उपचार गर्छौं । नागरिकताको होइन, मानव जातिको उपचार । त्यस कारण यो मानव जातिको यस भेगमा भएको, यस भेगमा प्राप्त सफलता हो ।”
म यस सफलताको पछिल्लो घडीमा यतिबेला जसले असाधारण भूमिका खेल्नुभयो, उहाँहरुलाई सफलताको निम्ति विशेष बधाई भन्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसभन्दा अगाडि यसको इतिहासतिर अलिकति फर्किन चाहन्छु । त्यतिबेला म गृह मन्त्री थिएँ । यो २४,२५ वर्ष अगाडिको कुरा हो । म हाम्रा पुराना शास्त्रहरुमा अलिक रुचि राख्छु । मैले शास्त्रमा पढिआएको थिएँ, पिता जमादग्नीले दिएको आदेश बमोजिम पर्शुरामले आफ्नै आमाको बञ्चरोले काटेर हत्या गरे । तर आमाको शिर छिनाइसकेपछि छोरा पर्शुरामले बुबासँग भने, मैले तपाईंको आज्ञा त माने अब मेरो माग पूरा गरिदिनुप¥यो । जो तपाईंले वचन दिनुभएको थियो । उनले भने, मेरी आमालाई फेरि जस्ताको तस्तै ब्युँझाइदिनुस । अनि जमादग्नीले अपरेसन गरेर आफ्नी पत्नी रेणुकालाई ब्युँझाइदिए जस्ताको तस्तै । लक्ष्मण लंकामा घाइते भए, बेहोस भए, कोमामा गए । औषधिको थलो भनेको त फेरि हिमालय पर्वत नै थियो । औषधि उत्पन्न हुन्छ हिमालयमा । जाऊ हिमालयमा गएर औषधि लिएर आऊ भनेर हनुमानलाई भनियो । उनले औषधि बोकेर गए र लक्ष्मण ब्युँझिए ।
धन्वन्तरिदेखि ऋषि पतञ्जली अझ अगाडि ऋषि चरक । यस्ता ऋषिहरुले धन्वन्तरिको परम्परालाई अगाडि बढाएका थिए । यो यहीँ ठाउँ हो जहाँ जडीबुटी पनि उत्पन्न हुन्छ र अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसन त्यो तहसम्मका त्यस बेलाका सर्जनहरु पनि यहीँ थिए । शनिको नजर पर्नेबित्तिकै पार्वतीका छोराको शिर गायब भयो, आपत प¥यो । त्यस पछि छेउमा जे भेटिन्छ त्यसको टाउको लेऊ भनियो । हात्तिको टाउको ल्याएर जोडे । म्याचिङको प्रोब्लेम पनि हल गरेका रहेछन त्यतिबेलासम्म । अहिले अब बल्ल हामी म्याचिङ गराउने त्यो प्रविधितर्फ उक्लिदै छौँ ।
मैले यो प्रसंग किन भनेको हो भने म गृहमन्त्री भएको बेला, त्यसभन्दा अगाडि, अलिक अगाडिसम्म यस ठाउँमा छालाजुत्ता कारखाना थियो । छालाजुत्ता बाँसबारीको सस्तो हुने भएकोले लगाउन मन पराउँथे धेरै मानिस । सस्तो पाइन्थ्यो, दुई रुपैयाँ, तीन रुपैयाँ, अढाई रुपैयाँमा छाला जुत्ता राम्रो लगाउन पाइन्थ्यो । म पनि दुई–अढाई रुपैयाँमा जुत्ता किनेर लगाउँथे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको । धेरै महंगो किन्यो भने पनि चार÷पाँच रुपैयाँ पर्दथ्यो । मैले लगाउने चाहिँ दुई, अढाई, तीन रुपैयाँका थिए । उद्योगहरुमा मेरो विश्लेषणमा एउटा उल्का आइराखेको थियो–उद्योग मास्दै जाने । म वेचैन थिएँ, उद्योग मासिँदैछन अरु थोेक केही हुँदैछैन । त्यस अवस्थामा एक दिन डाक्टर अरुण सायमीले मनमोहनजी र हामी भएका ठाउँमा मुटु अस्पताल खोल्नु प¥यो भन्नुभयो । होचो सिलिङ भएदेखि मेरो टाउको ठोकिन्थ्यो होला, म खुसीले त्यति उफ्रिएँ । एउटा नयाँ काम हुने भयो । त्यति खुशी छाएको थियो । साँच्चै नेपालमा हामी हृदयरोग निको पार्ने काम गछौं त ? सक्छौँ ?
हाम्रोमा साधारणतया गाउँघरमा मुुटु रोग लाग्दैन । शिकारी लाग्छ । शिकारीले वाण हान्छ । कहिले कहिले धामी, झाँक्रीले रिसायो भने वाण हान्छन । खुशी भयो भने वाण तर्काउँछन । निको भयो भने वाण तर्कायो नत्र भने वाण भित्रैसम्म गडिसकेको रहेछ गयो । शिकारीले वाण हान्थ्यो, अचानक मान्छे फेन्ट हुन्थ्यो । ऐया भनिसक्दा पुक्लुक्क हुन्थ्यो । शिकारी लाग्थ्यो, हार्ट याट्याक हुदैनथ्यो, ब्रेन ह्यामरेज हुदैनथ्यो । डा. सायमिको कुरा सुनेपछि मनमा प्रश्न उठेको थियो, यो मुटुको शिकारी लाग्न छोड्छ त नेपालमा ? शिकारी युग अन्त्य हुन्छ ? हामी विज्ञानको युगमा प्रवेश गर्छौं ? शिकारीको युगबाट मुटुमा रोग लाग्छ र त्यसको उपचार हुन सक्छ भन्ने युगमा प्रवेश गर्छौं ? त्यसमा चिन्ता थियो । त्यस पछि मैले जानेका डक्टरहरु, अरुण सायमीले त्यसमा कुरा चलाउनुभयो, डाक्टर भगवान कोइरालाले उत्साह देखाउनु भयो त्यसमा । अगाडि बढाउनुस सरकारले समर्थन गर्छ । ठाउँ कहाँ गर्ने ? बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको ठाउँ खाली भएको छ । सबै दिने कि आधा दिने ? अलिकति दिने की पूरै दिने ? दिने की नदिने ? अस्पताल भनेको स्वाथ्य चौकीभन्दा माथि देखेको वीर हस्पिटल, अञ्चल अस्पतालसम्मका कुरा थिए त्यस बेला । त्यो अञ्चल अस्पतालभन्दा माथि नदेखेकोले बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको सम्पूर्ण एरिया एउटा मुुटु अस्पताललाई दिनु भनेको वेस्ट अफ ल्याण्ड हो, त्यो पर्र्दैन भन्ने जस्तो । कति प्राप्त गर्नुभयो, आधा प्राप्त गर्नु भयो की पूरा ? जेहोस त्यो बहस अलिकति चलेको थियो ।
आज मैले सुने १७ हजार ओपन हार्ट सर्जरी भइसकेको छ यहाँ । लाखौंले उपचार पाएका छन । अब आजदेखि इमरजेन्सी वार्डको विस्तार भएको छ । ३४ बेडको इमरजेन्सी वार्ड भएको छ । पहिले यो वार्ड सानो थियो । अब हामीसँग नयाँ–नयाँ प्रविधिहरु छन । आँखाको अप्रेशन गर्न प¥यो भनेपछि मान्छेहरु थर्कमान हुन्थ्ये । आँखाको अप्रेशन गर्र्ने भनेपछि कहाँ सुइ घोच्ने, के गर्ने यति बाक्लो कालो चस्मा लगाएर हिडन पर्ने अनेक–अनेक थियो । मैले इम्युनोसप्रेस्यान्ट औषधिहरु खानु पर्छ र खाने गर्छु । शरीरको इम्योन प्रणालीको सप्रेसनले क्याटर्‍याक्ट हुँदो रहेछ, फूलो पार्दो रहेछ । दुईओटै आँखामा एकैचोटी फूलो प¥यो । अगाडिको बसेको छ भनेर देख्ने, तर नचिनिने । यसो आकृति जस्तो मात्र देखिन्छ, मान्छे चिनिदैन । त्यस्तो हालत भयो । कागज हेर्दा मैले अक्षर नदेख्ने मात्रै होइन की यहाँ कालो छ भन्ने पनि नदेख्ने सेतो मात्र देख्ने । यस्तो स्थिति भयो, अपरेसन त गर्नै प¥यो । अपरेसन गर्दा सुई घोच्छन की भन्ने पनि थियो । सुई पनि घोचेनन, यसो ड्रप्स राखी दिएर १० मिनेट एकछिन पर्खनुस भने । लगेर बेडमा सुताए । यो बत्तिमा हेर्नुस है भने । सात मिनेटपछि फेरि थोपा हाल्यो, विस्तारै आँखा खुल्दै जान्छ भन्यो । दुईचार मिनेटपछि छंग देखें, छक्क लाग्यो । अपरेसन यति सजिलो रहेछ ।
मेडिकल सेक्टरमा हामी आफैँले पनि काफी प्रगति हासिल गरेका छौँ । चार/पाँच दिन अगाडि म तिलगंगा आँखा अस्पतालमा गएको थिएँ । त्यहाँको प्रगति देख्दा निकै खुशी लाग्यो । उहाँहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्लुएचओको एउटा सहयोगीको हैसियत, सहकार्य गर्ने संस्थाको हैसियत प्राप्त गर्नु भएको छ । यस्ता विश्वका ८ ओटा संस्थामध्ये तिलगंगाले मान्यता प्राप्त गरेको छ । यो सानो कुरा होइन । नेपालले बनाएका लेन्सहरु विश्वव्यापी रुपमा वितरण भएका छन । अहिले ५० लाख लेन्स वितरण भएका छन र दुनियाँका अनेक हस्पिटलले नेपालले तयार गरेका लेन्सहरुको प्रयोग गरिराखेका छन । हामीले काभ्रेमा भ्याक्सिनका लागि भाइरसहरुको संकलन गरेका छौं, तिनको बैंक तयार गरेका छौं । जसबाट हामी विभिन्न किसिमका खोप दिन सक्दछौं, भाइरसको संकलन गरेर खोप दिन सक्दछौं । यस्ता अनेक उच्चस्तरीय प्रयोग, परीक्षण नेपालमा भएका छन् । जसमध्ये गंगालाल हृदय केन्द्र, सफलताको इतिहास बनाउँदैछ । यसको स्थापनाका २४ वर्षहरुमा मेडिकल सेक्टरमा सफलताको इतिहास उल्लेख गर्दा गंगालाल हृदय केन्द्रलाई स्मरण गर्नुपर्दछ ।
यसले गरेको प्रगति, यसले पुर्‍याएको सेवा दुईवटै पक्ष छन । यसले पु¥याएको सेवा असाधारण छ । मलाई लाग्छ यहीँ पनि हुनु हुन्छ होला सायद यसले पुर्‍याएको सेवाबाट लाभ लिएर जीवित भइरहेका साथीहरु । नभए देशभरी हुनुहुन्छ । यसले आफुलाई एउटा मोवाइल हस्पिटलको रुपमा पनि विभिन्न ठाउँहरुमा गएर सर्भिसहरु उपलब्ध गराएको छ । यसै हस्पिटलमा बहुत धेरै सेवाहरु उपलब्ध भइरहेका छन । यसबाट उत्पादित अनुभवी डक्टरहरु, यसबाट प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीहरु, नर्सहरुले विभिन्न ठाउँमा गएर पनि महत्वपूर्ण सेवा पुर्‍याउनु भएको छ । त्यसकारण म यस सफलताको उच्च प्रसंशा गर्न चाहन्छु । यस्ता सफलताका कथाहरु अरु पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुले हासिल गर्न सकनु र यो भूमि र हाम्रा पूर्खाहरुको स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रको गौरव, गौरवपूर्ण इतिहास । फेरि पुनःप्राप्ति र उचाइमा पुर्‍याउन सकौं ।
हाम्रा दार्शनिक पुर्खाहरुले जुन दर्शनको प्रतिपादन गरे, त्यसले विकासको ढोका खोल्यो । जस्तो सांख्य दर्शन । सांख्य दर्शनको अनुयायीको रुपमा कपिल मुनीले योग र सांख्यको विकास गरे । दर्शनको पनि विकास गरे, योगको पनि विकास गरे । हाम्रा अर्घाखाँचीका गुरु पतञ्जली सायद ११ सय वर्ष अगाडि योगको विकास गरे–स्वाथ्यका निम्ति योग । खाली शारीरिक मात्रै होइन अक्सिजनसँग सम्बन्धित, प्राणसँग सम्बन्धित, फोक्सोसँग सम्बन्धित, फोक्सोले शरीरका विभिन्न भागमा पु¥याउने अक्सिजनसँग सम्बन्धित र मस्तिष्कमा अक्सिजनको महत्वका सम्बन्धमा । यो बढी स्पस्ट ढंगले हाम्रा अर्घाखाँचीका गुरुजी पतञ्जलीले विकास गरे । ध्यान–ध्यानबाट स्वास्थ्यमा लाभ, ध्यानबाट मस्तिष्क, मस्तिष्को एकाग्रता बुद्धले विकास गरे २६ सय वर्ष अगाडि । तसर्थः द्वापर युगमा कृष्णका मुखबाट गीताको रुपमा गुरुहरुले बताएका छन् योगको महत्वको बारेमा । योगको स्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धको बारेमा । दर्शनको बारेमा, सांख्यको बारेमा । अन्धविश्वास होइन, त्यसभन्दा माथि उठेर प्रयोगमा विश्वास गरे । जसबाट औषधि विज्ञानको बाटो विकास गर्न सक्यो । अन्धविश्वासमा परेर अब भगवानको इच्छा हो बाँचिने भए बाँचिन्छ भन्ने हो भने औषधि विज्ञानको विकास हँुदैन । अपरेशनको अर्थ हुदैन । इन्जेक्सन र अनेकको अर्थ रहँदैन । हामीले निदान अथवा डाइग्नोसिस गरिरहनु पर्ने अर्थ रहँदैन । यसको अर्थ प्रयोगात्मक विज्ञानसँग सम्बन्धित छ । त्यो विज्ञान प्रयोगात्मक दर्शनबाट निस्किन्छ ।
म धेरै ठाउँहरुमा भन्ने गर्छु, पुर्नउत्थान । त्यसको अर्थ हुन्छ जसको पहिले उत्थान थियो, बीचमा हराएको थियो, फेरि उठ्नु पर्छ । त्यस कारण पुर्नउत्थान हाम्रोमा जरुरी छ । जहाँ उत्थान हुँदैछ, त्यहाँ पुर्नउत्थान होइन–उत्थान । कतिपय देशहरुले उत्थान गरे । हामीसँग अब मैले डक्टरहरुको स्पीडमा ह्वाट्स द इम्र्पोटेन्ट अफ द जेनेटिक मेमोरी भनेर भनिरहन पर्दैन होला । कार्वन इलिमेन्टले खाली मान्छेको पूर्वजको शक्लसुरत, रंग, आनिबानी मात्रै उतार्ने होइन । मस्तिष्क पनि उतारेर ल्याएको हुन्छ । त्यस कारण हाम्रा सन्ततिले अवसर पाउने बित्तिकै हाम्रा ती महान धन्वन्तरिदेखि लिएर, औषधि विज्ञानका प्रणेतादेखि लिएर, प्रयोगकर्तादेखि लिएर ती सबैको ज्ञान प्रस्तुत गर्न सक्दछन् । कतिपयमा साहित्यका कल्पनाहरु मिसिएका होलान । कथानकता भरिएको होला । तर त्यो कल्पना असम्भव कल्पना मात्रै थिएन ।
पुष्पक विमान, पुष्पको विमान परापूर्वकालमा कल्पना गरिएको थियो । अनौठो लाग्छ–पुष्पक विमान लिएर रामलाई लिन लंका गइयो, एयरर्पोट बनाइएको थिएन । पुष्पक विमान हेलिकप्टर झैँ ल्याण्ड गर्दथ्यो र हेलिकप्टर झैँ टेक अफ गर्दथ्यो । त्यो एयरर्पोटको चाहिँ कही वर्णन पाइँदैन । तर जान्थ्यो । कथा सही । तर हाम्रा पूर्खाहरुले कति टाढा देख्दा रहेछन भने अहिले पानी जहाज माथि नै रनवे र टेक अफ, यति छोटो रनवेमा ल्याण्डिङ टेक अफ गरिएको देखिन्छ । त्यस्तो त बनेकै छ नि । तसर्थः हाम्रा पुर्खाहरुको दृष्टि असाधारण थियो ।
मैले अक्सर भन्ने गर्छु हामी अनाहक पछाडि पारिएका छौं । मैले धेरै ठाउँमा बोल्दा भन्ने गरेको छु, ग्य्राविटेसनको थ्योरी आचार्य भास्कर अथवा भास्कारचार्यले पत्ता लगाउनु भएको थियो र ११५० मा प्रकाशित उहाँको सिद्धान्त शिरोमणी भन्ने पुस्तकमा बहुत राम्ररी व्याख्या गरिएको छ, ह्वाट इज ग्राभिटेशन ? पृथ्वी गोलो छ । किन सम्मजस्तो देखिन्छ ? यसको गोलाई कति छ ? यसको व्यासको पनि उनले मेजरमेन्ट दिएका छन गणितबाट । त्यो मेजरमेन्ट साइन्सले २० मिटर फरक पर्‍यो भनेको छ । धुले पाटीमा धुलो हाल्दै मेट्दै, सिमलीको डाक्लाले लेख्दै, फेरि मेट्दै गरेर नापेको आज गूगोलबाट नापेको भन्दा २० मिटर फरक पर्‍यो भनिराखेका छन मानिसहरु । त्यो २० मिटर साइन्सले सच्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भास्करचार्य वाज करेक्ट ।
नवग्रह छन् भनेर गणितले हजारौं वर्ष अगाडि भन्यो । साइन्सले मानेन । हाम्रा क्यामेराहरुले नव ग्रह समातेन, यो होइन भन्यो । क्यामेराहरु डेभलप हुँदै गए । ७ ग्रहबाट ८ ग्रह समातियो भन्यो । आठ चाहिँ एकदम पक्कै हो । त्यो भन्दा बढी होइन, किनभने हाम्रा क्यामेराले समातेन । साइन्स आफैंमा सत्य हो । क्यामेराले समातेपछि मात्रै मान्छ । उसका क्यामेराले समातेको आठ ग्रह ठिक थियो । आठ वटै समातेका हुन, तर क्यामेरा कमजोर थियो । गणित कमजोर थिएन । गणितले नव ग्रह छन् भनेर हजारौं वर्ष अगाडि भन्यो । कन्फ्युजन त्यसमा पनि थियो, ग्रहहरु कुन–कुन हुन र उपग्रह कुन हुन ? नक्षत्र कुन हुन् ? त्यसमा केही डिस्ट्यान्सको हिसाबले नजिक भएकालाई ग्रह भनियो, टाढा भएकालाई नक्षत्र त भन्यो तर ग्रहहरुका नामहरुमा वा जस्तो चन्द्रमा उपग्रह थियो तर ग्रह हो भन्ने भ्रम पर्‍यो । तर, चन्द्रमाको बारेमा त्यसको गति, त्यसको अवस्थिति, त्यसको डिस्ट्यान्स हाम्रा पुर्खाहरुले पत्ता लगाएका थिए र ज्वारभाटा कहिले जान्छ ? के हुन्छ ? सबै भनेको थिए ।
माइकबाट भनिरहेका छन्, म छक्क परें यहाँका बाहुन बौलाएकी के हो ? भन्नै नहुने मन्त्र माइकबाट भनेका छन् । के मेरा ठाँउका गुरु पछाडि परेका या ब्याकवाड एलिमेन्ट हुन् । कि मेरा ठाँउका गुरु बेठिक कि यहाँका गुरु बेठिक के हो ? बनारस त फेरि शास्त्रहरुको एउटा ठेक्का लिएको ठेकेदारकै अखडा रहेछ । भनेपछि भन्नु नहुने कुरा त रहेनछ् । औषधि विज्ञानमा पनि त्यस्तै भयो जानेको औषधि अर्कालाई बताउनु हुदैन, बताउनु हुँदैनको अर्थ अर्को के रहेछ भने विद्वतामा श्रेष्ठ आफूलाई देखाउनु प¥यो ।
यो औषधि, यो जडीबुटी यसमा काम लाग्छ, यसमा निको पार्छ भन्ने कुरा मानव जातिको कल्याण हुन्थ्यो । त्यो आम्दानीको मेलो एउटा अर्को सुपेरेयोरिटी देखाउने कुराहरु रहेछन । यसो गर्दा हामी पछाडि पर्‍यौं । अब हामीले पुनःउत्थानका काम शुरु गरेका छौँ । शरीर विज्ञानमा टाउको पनि फलक्कै निकालको छ । एकछिन गिदी बाहिर राखेर उपचार गरेको छ, ठिक भएपछि फेरि राखेर ठिकठाक गरेको छ । मुटको त्यसैगरी उपचार गरेको छ । मेरो पनि किड्नी फेल भयो । किड्नी फेरेर उपचार गराएकोछु, काम गरेको छ । यो ठाँउमा हामी पुगेका छौ । अब हामीले यतिमा सन्तोष गर्ने होइन, अगाडि वढनुपर्छ, अगाडि बढ्छौ । हाम्रा शास्त्रहरुमा भनिएझैं काटेर भुईमा खसेका हात टिपेर अस्पताल लगेर जोडेका छौ । त्यो त नेपालमै भएको छ नि, नारायण गोपाल चोकमा काटेर भँुइमा खसेको हात अर्को हातले समातेर कुदेर हस्पिटल गएर जोडेर यहीँ टिचिङ हस्पिटलमा बनाएको छ ।
सन् १९९७ मा चीनको एउटा अस्पतालले टुक्रिएको खुट्टोलाई जोड्यो भन्ने अखवारमा आयो । अचम्म लाग्यो एउटा महिलाको खुट्टो थिएन, अर्को महिलाको खुट्टो दुर्घटनामा छिनेछ र उनको मृत्यु पनि भयो । तर, खुट्टो थिएन उनको दाइने, खुट्टो प्राप्त भयो देब्रे । दाईने खुट्टाका ठाँउमा देब्रे राखेर दुईवटै देब्रे देब्रे खुट्टा भएको अपरेसन पनि राम्रै चलेको पनि देखियो । यी सबै मैले आफ्नै जीवनमा रुचिसाथ हेर्दा हेर्दै स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको छु । अनि म स्वास्थ्य त्यति राम्रो नभएर नआउने भएर सुतिराखेको थिएँ । आउनु न त भनी अलि जोड गरेपछि उठेर आएको थिएँ, अलि बोल्दै जाँदा लामो भएपछि यो नक्कली बिरामी हो कि क्या हो भन्ने पर्‍यो होला, नक्कली विरामी होइन, अस्थायी विरामी चाहीँ हो ।”
साउन ११ गते शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बाँसबारीको आकस्मिक तथा बहिरङ्ग सेवा भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश
Inaugural Address by PM K Oli at the First Nepal-India Logistics Summit
It is an opportune time in the history of both Nepal and India that the two countries have strong governments and both remain committed to widening and deepening cooperation in multiple areas for mutual benefit. In both countries, economic growth rates are in upward trends; development and prosperity have become…